Ukuhanjiswa kweBhasikithi yeziqhamo ezingaqhelekanga kunye nee-orchids "IParadesi yePhuket" eMoscow-odola iintyatyambo
Ibhasikithi yeziqhamo ezingaqhelekanga kunye neeorchid "IParadesi yePhuket"
Ukuhanjiswa ~ 6h., yasimahla eMoscow
Ububanzi 100 cm
Inkonzo entle .. ukuzibophelela ngexesha .. ulungiselelo olunengcinga .. ubudlelwane obukhulu
Ngama-19400 Букет из калл "Любимые каллы"
Isipha esigqibeleleyo seenyibiba ezimnyama ze-calla ezingama-20, iiroses zekrimu Taleya 17 iiPC, viburnum 4 iiPC, leucodendron 4 pcs, salal 1,5 pack
Ngama-13790 Isipha seenyibiba ezimnyama kunye neentyatyambo zekrimu "ubusuku beCastilian"
Isipha se-11 alstroemerias enemibala emininzi enezinto zokuhombisa uhlaza kwiphepha lekraft.
Ngama-3150 Isipha sealstroemerias ezimibalabala (11 alstroemerias)
Isipha seentyatyambo kwiithoni ezipinki zeerandi ze-Aqua ezili-10, iiroses ezili-9 ze-peony spray, i-1 bunch ye-lavender, iimpondo ezili-12 zomqhaphu, kunye nokuziva kunye nokupakisha. Iirebhoni zesilika zisetyenziselwa ukuhombisa.
Ngama-9050 Isipha seentyatyambo "uNicole"
Isipha seentyatyambo ezibomvu ezili-15, iiorchid ezimhlophe ezisixhenxe, ii-freesias ezisixhenxe ezimhlophe, isaladi, ii-aspidistra ezi-7, iribhoni.
Ngama-5900 Isipha seentyatyambo "iTet-A-Tet"
Isipha seentyatyambo ezinde ze-Ecuadorian (iiroses ezingama-25) ezineribhoni.
Ngama-6250 Isipha seentyatyambo zepremiyamu (iiroses ezingama-25)
Isipha seenyibiba ezimnyama ze-calla ezi-5, i-orchid etyheli cymbidium 11, ipakethi ye-lagurus etyheli ye-1/2, ipesika yaphakama ii-7pcs, iphepha lekrafti elishwabeneyo.
Ngama-6700 Isipha seentyatyambo "iMango"